प्रचण्ड सरकार : मलाई मेरा बुबा चाहिन्छ - Kantipath.com
प्रचण्ड सरकार : मलाई मेरा बुबा चाहिन्छ
लिबाङ (रोल्पा) । दश वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला अपहरणमा परेका मिरुल, रोल्पाका पत्रकार धनबहादुर रोकामगरकी छोरी पवित्रा रोकामगरले रुँदै भनिन्, “मेरा बुबाको कलमले कस्को के बिगारेको थियो ? किन अनाहकमा मेरा बुबालाई बेपत्ता पारियो ? किन अझै पनि मेरा बुबाकोे अवस्थाका बारेमा राज्य बेखबर छ ? प्रचण्ड सरकार, कि मलाई मेरा बुबा चाहिन्छ, कि यो प्रश्नको जवाफ दिनुहोला ।”
पवित्राका बुबा युद्धका बेला रेडियो नेपाल, सुर्खेतमा मगरखाम भाषाको समाचार वाचन गर्थे। पारिवारिक स्रोतका अनुसार त्यसबेलाको देशको बिग्रँदो परिस्थितिका कारण धनबहादुरलाई घरमा सहजै आउने जाने वातावरण थिएन । यसकारण धनबहादुर चाहेको समयमा परिवारसँग भेट्न तथा घर पुग्न सक्थेनन ।
पवित्रा नजन्मदै धनबहादुरका बुबा र फुपाजुलाई तत्कालीन माओवादीले घरमै आएर रातको समयमा गोली हानेका थिए । गोली लागेर छटपटाइरहेका दुवैजनालाई उनीहरुले पटकपटक धारिलो हतियार प्रयोग गरेर छियाछिया पारेपछि घरमै एकैसाथ दुवैजनाको मृत्यु भएको धनबहादुरकी श्रीमती दिलकुमारीले बताइन ।
त्यसबेला धनबहादुरका भाइलाई पनि गोली लागेको थियो । युद्धकै समयमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट नेपालगन्ज लगेर उपचार गरेपछि धनबहादुरका भाइको ज्यान बचेपनि धनबहादुरका बुबा र फुपाजुको एउटै चिहान बनेको उनले बताए । त्यसबेला भर्खरै विवाह बन्धनमा बाँधिएको धनबहादुरको जोडी भने ससुराली गएको हुँदा बाँच्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।
दिलकुमारीका अनुसार तीन पटकसम्म तत्कालीन माओवादीले धनबहादुरको घर जलायो जसका कारण परिवारको सदस्य गुमाएको पीडा हुँदाहुँदै धनबहादुरको परिवारले अर्काे ठूलो पीडा सहनुपरेको थियो । त्यसैले जीवन रक्षाका लागि पछिल्ला दिनमा धनबहादुर कहिल्यै घर फर्किएका थिएनन ।
विसं २०६० तिरको कुरा हो धनबहादुरकी श्रीमती दिलकुमारी सुत्केरी भएपछि सुत्केरी सामग्री तथा केही रुपैयाँ लिएर धनबहादुर सुर्खेतबाट लिबाङ आउएका थिए । १७ दिनकी सुत्केरी बुहारी घरमा छोडेर धनबहादुरकी आमा छोरालाई भेट्न लिबाङसम्म आइन । आमाछोरा दुइरात लिबाङ बसेपछि तेस्रो दिनमा उनकी आमा घर गइन् भने धनबहादुर कार्य क्षेत्र सुर्खेत । तर दुर्भाग्य उनको अन्तिम यात्रा प्यूठानको जलुकेमै रोकियो ।
आँसु पुछ्दै पवित्राले भनिन्, “धेरै वर्ष भयो बुबा बेखबर भएको अब त बुबा फर्कदैनन् भन्ने थाहा छ, तर पापी मन मान्दैन । बुबा फर्कने आशमा दिन गुजारीरहेका छौँ अझै पनि बुबा फर्कने झिनो आशा मनभित्रै लुकेको छ । यदि बुबा मारिएकै भए पनि आधिकारिक जानकारी पाए बुबाको काजकिरिया गर्ने थियौँ, अनिमात्र मनले शान्ति पाउने थियो ।”
गएको दशैंमा स्कुल बिदा भएपछि पवित्रा घर गएकी थिइन् । उनलाई यसपालिको दशैंमा बुबाको धेरै याद आयो । अनि एल्बममा सजिएका फोटो हेर्दै गर्दा उनका बुबाले अपहरणमा पर्नुभन्दा अगाडि लेखेर पठाएको चिठ्ठी फेला प¥यो । पवित्राले दोहो¥याइ तेह¥याइ त्यो चिठ्ठी पढिन् ।
त्यसमा लेखिएको थियो, “छोरी पवित्रा र छोरा वसन्तलाई मीठो प्यार, अनि सम्झना । के गर्नु ? सन्तानको मायाले छट्पटाउँदा पनि घर आउन पाइँदैन । तिमीहरु ठूला भयौ भने मसँगै राखेर पढाउनेछु । चिठ्ठीमा राखेर रु छ हजार पठाएको छु घरखर्च चलाउनु । अपुग भए गाउँमा सापटी लिएर चलाउनु । नआत्ती बस जिन्दगी लामो छ । सधैँ समय निष्ठुरी बन्ने छैन । आज दुःख गरे भोलि सुखको दिन फर्कनेछ । उही तिमीहरुलाई माया गर्ने धनबहादुर …..”
यस्तै, नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा रोल्पाका अध्यक्ष महेश न्यौपानेले पत्रकार धनबहादुर रोकाको अवस्थाबारेमा राज्यले चासो र चिन्ता गर्नैपर्ने बताए । पत्रकार धनबहादुरको अवस्था यथाशीघ्र सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको जोड छ ।
उनका अनुसार धनबहादुरका परिवारका सदस्य धनबहादुरलाई जिउँदो भेट्ने तीव्र चाहना बोकेर बाँचिराखेका छन् । उनीहरुको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भएका कारण सामान्य नागरिकभन्दा पत्रकारको परिवारलाई फरक ढङ्गबाट हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
Previous Previous post: क्षुद्रग्रह पत्ता लगाए नेपालीले
Next Next post: ट्र्याक्टर र मिनीट्रक दुर्घटना, ३ को मृत्यु